किन भंग हुँदै छ विशेष योगदान गर्नेहरुकै एनआरएनए प्रतिको मोह ? :: NepalPlus
किन भंग हुँदै छ विशेष योगदान गर्नेहरुकै एनआरएनए प्रतिको मोह ?
नेपालप्लस संवाददाता२०७८ कार्तिक ११ गते ९:२३
(फोटोमा सबैभन्दा माथि दाहिनेबाट दिपक खड्का र सुर्य सुवेदी । तल, दाहिनेबाट रवीन शर्मा ओली र रवीजंग लामिछाने)
एनआरएनको विवाद चर्कंदो छ । अहिले विवाद साम्य बनाउन पूर्व अध्यक्षहरु समेत जोडिएका छन् । संस्थाका बारेमा खासै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने जीवा लामिछने, उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचनहरु आ-आफ्नो कित्ताबाट सार्वजनिक भएका छन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अनावश्यक रुपमा विवादको केन्द्रमा तानिएको छ । प्रत्यक्ष-परोक्ष रुपमा राजनीतिक दलहरु गैर आवाशिय नेपालीका बिचमा उग्र रुपमा छिरेका छन् ।
त्यसो त, भर्खर देखिएको विवाद मिल्छ पनि । अधिवेशन थपिएको समयमा हुन पनि सक्ला । किनभने अहिलेको विवादले पदीय झगडाको रुप धारण गरेको छ र यो त्यही नै हो । तर, अब एनआरएनलाई मिहिन रुपमा सुधारिएन भने संस्था रहनुको औचित्य समाप्त भएको छ । ८० लाख नेपालीको साझा संस्था भनिएको यो संजाललाई बनाउन जो जो अभियन्ताहरुले बेलायतका चिसा कफीसपहरुमा अबेर रातसम्म छलफल गरेर खाका कोरेका थिए । ति मध्ये धेरैले यो संस्थाबाट हात झिकेका छन् । अथवा जोडीनुपर्ने धेरै यस्ता मान्छेहरु जो निरन्तर नेपाल र नेपालीको लागि काम गरिरहेका छन ति जोडीएका छैनन् ।
डा. सुर्य सुवेदी कता छन कसैलाई पत्तो छैन । एनआरएन बनाउन दिलोज्यान दिएर कस्सिएका उनी अहिले साधारण सदस्य समेत छैनन् । आफुले जन्माएको संस्था बयस्क हुँदै गर्दा चटक्क छोडेर बाहिरिने मन पक्कै पनि सुवेदीलाई थिएन होला । छोडे । सोचे जस्तो भएन । र एक्लै नदी फर्काउने सामर्थ्य पनि हुँदैन सबैमा । उनी अलग्गिए ।
केही अघी नेपालप्लससँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए- ‘एनआरएनए सोचेको, बनाउन खोजेको जस्तो भएन । जति कोसिस गर्दापनि भएन । झन राजनितिको फोहोरि खेल हुन थाल्यो । धेरै खराबी भयो । खराब नियतका मानिसहरु आए । त्यसपछि यसमा लागेर काम छैन भन्ने भयो र मैले चटक्कै छोडें । सन् २०१५ देखिनै म सदस्य समेत नभएको हुनाले के भएको छ भन्ने मलाई जानकारि पनि छैन ।
अर्का अभियन्ता दिपक खड्का जसले कयौं रात नसुतेर एनआरएनलाई एउटा फ्रेममा राख्ने रेखा कोर्दै थिए । तर अलग्गिए । संघका संस्थापक समेत रहेका खड्का अहिले संस्थाका कुनै पनि गतिविधीमा संलग्न छैनन् । अष्ट्रेलियामा बसेर नेपाल र नेपालीका लागि आफ्नै हिसावले काम गरिरहेका एनआरएनका यि संस्थापक यतिबेला यो संस्थाका साधारण सदस्य मात्र हुन ।
किन मन मर्‍यो त संस्था प्रती ? उनी भन्छन- “हामीले संस्था स्थापना गर्ने बेलामा हाम्रो उद्देश्य नितान्त फरक थियो, साधारण थियो । त्यो बेला हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको देश प्रतिको मायाँलाई कसरी नेपालसँग जोड्ने, जन्मभूमी र हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी अविरल राख्ने भन्ने पवित्र उद्देश्य थियो । अर्को कुरा हामीले हाम्रो सिप र विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई नेपालसँग जोड्ने भन्ने थियो । त्यो बेला यस सम्बन्धमा धेरै काम भए पनि । संसारभरका सबै साथीभाइसँग हामी जोडीयौं पनि । तर यसको यती ठुलो महत्वलाई हामीहरुले कता कता नेपालको राजनीतिक ऐना रिफ्लेक्सन गर्‍यौं”।
उनले थपे- “म राजनीति नजान्ने भएकोले पनि मलाई संस्थामा सकृय रहन खासै रुची लागेन । एनआरएन त साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक मैदान जस्तै भैसक्यो । राष्ट्रिय परिषद, अन्तरराष्ट्रिय परिषद जहाँँ पनि उस्तै छ । त्यसकारणले खेलाडी साथीहरुलाई छाडिदिएर म पर्यवेक्षकको रुपमा बसेको छु ।”
तथापी खड्काले आफूले संस्थालाई अत्यन्त मायाँ गर्ने र संस्थाबाट पूर्ण रुपमा बाहिर नगएको बताए । उनले भने “संस्था प्रती मेरो अगाध मायाँ छ । म चाहेर पनि यो संस्थाबाट पूर्ण रुपमा अलग हुन सक्दिन ।”
लामो समय विदेशमा बसेर नाम दाम कमाइसकेका खड्का एनआरएन सामुहिक लगानिका कुराहरु भित्र छन कि छैनन त ? अष्ट्रेलियाको उत्तरी सिड्नीका लागि मानार्थ महावाणिज्यदुत रहेका खड्काले भने- “देशका लागि गर्ने कतीपय सहयोगहरु म आफ्नो हिसाबले गरिरहेको हुन्छु । तर एनआरएनएको संयुक्त लगानी जस्तो कि भर्खरको १० अर्वको प्रोजेक्टमा मलाई पनि खबर भएको थियो । मैले केही करोडको सहभागिता जनाउँछु भनेको पनि थिएँ । तर त्यसपछी के भएको छ भन्ने कुराको कुनै जानकारी छैन । तर संस्थाले यस्तो काम गरेको सुन्दा भने मलाई निकै खुशी लाग्दछ । खासमा एनआरएनले गर्ने भनेको नै यस्तै हो ।”
दिपक खड्काको थप भनाई छ “हुन त त्यो रकम ठुलो नहोला । तर त्यसले पनि केही रोजगार त सृजना गरिहाल्दछ । वास्तवमा हरेक सानो सानो लगानी नै देशको लागि ठुलो कुरो हुन्छ” । तर पनि उनी मन खोलेर एनआरएनमा जोडीन सकेका छैनन् ।
यस्ता अभियन्ता धेरै छन् जो आफ्नै तरिकाले नेपालसँग त जोडीएका छन् तर एनआरएनसँग जोडीएका छैनन् । यस्तै मध्येका अर्का व्यवशायी हुन रवी जंग लामिछाने । बेलायतमा लामो समय देखी बसोवास गर्दै आएका लामिछाने खास गरेर फेसन डिजाइनको क्षेत्रमा आवद्द छन् । यिनको कुनै पनि कोणबाट एनआरएनसँग साईनो जोडीएको छैन । तर यिनले नेपालमा आउने हरेक विपतहरुमा नेपालीहरु सँग हातेमालो गरिरहेका हुन्छन् । लामिछानेलाई चिन्नेहरु भन्छन्, ‘यिनी नेपाल र नेपालीका लागि एक्लो एनआरएन हुन । जो नेपालीका सुख दु:खमा त छँदै छन दर्जनौं गरिव र असह्य वाल वालिकाहरुलाई पढाउने जिम्मेवारी पनि काँधमा उठाएका छन् ।’
तपाईंलाई यती धेरै प्रवाशी नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था एनआरएन छ भन्ने थाहा छ ? नेपालप्लसको प्रश्नमा उनले भने “किन थाहा नहुनु, थाहा छनी । एनआरएनको बारेमा सुनिरहेको हुन्छु, पढिरहेको छु । तर एनआरएनमा लागेर राजनीति गर्ने रुची जागेन । आफ्नो कामले पनि फुर्सद पाएको छैन । यसको मतलव मैले देश वा समाजको लागि केही गरेको छैन भन्ने होइन । मैले आफ्नो हिसावले समाजसेवा गरिरहेको छु । समाजसेवा यस्तो कुरा हो जो कसै सँग तुलना हुँदैन । मैले गरेको कुराले म सन्तुष्ट छु, देशले केही पाएको छ । यसका लागि एनआरएन मै लाग्नु पर्छ भन्ने छैन” ।
तर पनि सामुहिक रुपमा जाँदा समाजले अली बढी फाईदा पाउछ होला नि ? अर्को प्रश्न थियो । उनले भने “मलाई एनआरएनमा लाग्न मन लागेन । धेरै राजनीति त्यसमा पनि गुट उपगुट, जातिय कुरा छन् । यस्तो सामाजिक संस्था त राजनीति, जात जाती, गुट उपगुटबाट बाहिर रहेर सबै नेपालीको साझा संस्था हुनुपर्ने हो नि । यस्तो संस्थामा कांग्रेस, कम्युनिष्ट भनेर निरन्तर राजनीति हुनु कती दु:खद हो भन्ने कुरा त म ब्यक्त पनि गर्न सक्दिन” ।
उनको थप बह्नाई छ “विदेशमा बसेर नेपालको राजनीति गर्नका लागि मात्र यो संस्था बनेको जस्तो देखियो । उद्देश्य राम्रा भए पनि एनआरएनलाई गलत बाटोमा लगिंदैछ । त्यसैले पनि मलाई संस्थामा जोडीन कुनै रुची लागेन ।é
यस्तै अनुभव फ्रान्सका ब्यवशायी रबीन शर्मा ओलीको पनि छ । ओली केही समय संस्थाका गतिबिधिमा लागेका पनि थिए । तर केही समयमा नै ओझेल परे । रुची हरायो । भन्छन- एनआरएनएमा शुरु शुरुमा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेर कार्यक्रममा जाने, सुन्ने गरियो । एनआरएनएले गर्ने कार्यक्रममा सहयोगपनि गरियो । तर पछि एकदमै राजनिति हुन लाग्यो । धेरै नेता बन्नुपर्ने, भाषण गर्ने, झुटा कुराहरु हुने । नेपालीनेपालीबिच द्वन्द, आरोप लगाउने र फुटाउने गरेको देखियो । खर्चको विवरणपनि पारदर्शी देखिएन । सामाजिक संस्था भन्या छ कहाँ के कति भयो खर्चसर्च देखाउन गाह्रो मान्ने । सक्षम मान्छे भन्दापनि राजनिति र प्रशंसा पाउने लोभले, देखाउनकालागि पद लिने भएपछि यो संस्थामा बसेर हामी भुइमान्छेलाई काम छैन । राजनिति गर्न जानिंदैन, मनपनि पर्दैन, देशकोलागि र यहिंको नेपालीलाईपनि परेको बेला सहयोग गर्न एनआरएनएमा नलागेरपनि सकिन्छ भनेर एनआरएनएमा वास्ता हुन छोडेको हो ।”
ओली अहिले बाहिरै छन् । देशलाई परेको बेला हात र मन फुकाउन कठिन मान्दैनन् । फ्रान्समा आयोजित नेपालीका हरेका कार्यक्रममा उनी सहयोग माग्दा हात फैलाईहाल्छन् । नेपालका हरेक बिपत्तिमा आर्थिक सहयोग गरिरहेकै छन् । “सामाजिक काम चर्चाका लागि गर्ने कुरो होइन खासमा । तर हामी चर्चा खोज्छौं” उनी भन्छन ।
एनआरएन कहाँनेर चुकेको छ सबैलाई थाहा छ । अहिले चलेका झगडा जुन छन् ति नितीका लागि होइनन् । यसले संस्थाको साख अझ खस्छ, धेरै मान्छेको मोहभंग हुँदै जान्छ ।